स्कुलमा पढाउने निता अम्बानी कसरी बनिन् मुकेश अम्बानीकी श्रीमती ? – " सुलभ खबर "
स्कुलमा पढाउने निता अम्बानी कसरी बनिन् मुकेश अम्बानीकी श्रीमती ?
उनले नर्सी मोन्जी कलेज अफ कमर्स एण्ड इकोनोमिक्सबाट बि कमको अध्ययन पुरा गरेकी थिइन् । उक्त कलेज मुम्बईमा रहेको छ बाल्यकालदेखि नै नृत्यको सौखिन रहेकी उनले भारत नाट्यम पनि सिकेकी छिन । उनले विवाह पुर्व विभिन्न कार्यक्रममा नृत्य पनि प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
यी दम्पत्तिको दुई छोरा र एक छोरी सन्तान रहेका छन् । निता अम्बानीले आइभिएफ मार्फत दुई जुम्ल्याहा सन्तानलाई जन्म दिएकी हुन् । निता अम्बानीलाई पौडी खेल्न, नाच्न, र आफ्ना सन्तानहरुसँग समय बिताउन एकदमै मनपर्छ ।निता अम्बनीको तौल कुनै समय ९० केजीभन्दा बढी थियो । उनले आफ्नो छोरा अनन्तलाई तौल घटाउन ठुलो प्रेरणा दिने काम गरेकी थिइन् ।